Dugsiga Sare ee Camuud - Gpedia, Your Encyclopedia
Dugsiga Sare ee Camuud
Dugsiga Sare ee Camuud (Amoud High-school) waa dugsi sare oo ku ooli jirey deegaanka Camuud ee 5ta km waqooyi bari ka xiga magaalada Borama, gobolka Awdal, Somaliland.
Deegaanka Camuud waa dhul beeroleey ah oo dhaca 5 km waqooyi bari magaalada Borama. Deegaankan oo leh dooxyo dhowr ah, sida Dooxa Qoor-gaab, ayaa waxuu caan ku yahay beeraha khudaarta iyo midhaha. Jaamacada Camuud waxay ku taalaa koonfurta deegaanka Camuud, taasi oo ah meesha loogu magac daray jaamacada.
Qisaastii wakhtiyadii gumeysiga Ingiriisku maamuli jiray Waqooyiga Soomaaliya ayaa wuxuu dhisay dugsi sare oo loogu magac daray deegaanka Camuud, waa Dugsiga Sare ee Camuud. Tan iyo wakhtigii dowladii Siyaad Bare dugsiga Camuud wuxuu ahaa iskool ardeydu wax ka bartaan isla mar ahaantaana dhex dagan yihiin, sababtoo ah magaalada wuu ka go'naa dugsiga sare ee Camuud.
Ka dib, burburkii dowladii Soomaaliya ayaa keenay in Dugsiga Sare ee Camuud isna burburo, kaasi oo dib loo soo nooleeyay sanadkii 1996kii markii la isla gartey in laga dhigo Jaamacada Camuud.}}
↑ "Deegaanka Camuud waa beeroleey 5 km waqooyi bari magaalada Borama"
↑ Dugsiga Sare ee Camuud
↑ "wakhtiyadii gumeysiga Ingiriisku maamuli jiray waqooyiga Soomaaliya"
↑ "The History Of Amoud University".
↑ "The Faculty Of Agriculture Of Amoud University".
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Dugsiga_Sare_ee_Camuud&oldid=203270"